छोरा - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
भगवान पुत्र भगवान को दोस्रो व्यक्ति हो, पिता द्वारा अनन्त काल बाट जन्मिएको। उहाँ उहाँ को माध्यम बाट पिता को वचन र छवि हुनुहुन्छ र उहाँ को लागी भगवान ले सबै चीजहरु लाई सृष्टि गर्नुभयो। उहाँ पिता द्वारा येशू ख्रीष्ट, भगवान को रूप मा पठाइएको थियो, शरीर मा प्रकट गरीयो कि हामी मोक्ष प्राप्त गर्न को लागी। उहाँ पवित्र आत्मा द्वारा गर्भवती हुनुहुन्थ्यो र भर्जिन मरियम बाट जन्मनुभएको थियो, उहाँ पूर्णतया भगवान हुनुहुन्थ्यो र पूर्णतया मानव हुनुहुन्थ्यो, एक व्यक्तिमा दुई प्रकृति एकजुट हुनुहुन्थ्यो। उहाँ, परमेश्वरको पुत्र र सबै मा प्रभु, सम्मान र पूजा को योग्य हुनुहुन्छ। मानवजातिको अगमवाणी उद्धारकर्ता को रूप मा, उहाँ हाम्रा पापहरु को लागी मर्नुभयो, शारीरिक रूप बाट मरेको बाट उठाइयो र स्वर्ग मा उचालियो, जहाँ उसले मानिस र भगवान को बीच एक मध्यस्थ को रूप मा कार्य गर्दछ। उहाँ फेरि महिमामा आउनुहुनेछ परमेश्वरको राज्यमा राजाहरु को राजा को रूप मा सबै राष्ट्रहरुमा शासन गर्न। (यूहन्ना १: १.१०.१४; कलस्सी १: १५-१1,1.10.14; हिब्रू १: ३; जोन ३:१;; तीतस २:१३; मत्ती १:२०; प्रेरित १०:३;; १ कोरिन्थी १५: ३-४; हिब्रू १. 1,15 ; प्रकाश १:: १))
हामीले यहाँ छलफल गरिरहेको पहिचानको प्रश्नलाई येशू आफैले आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नुभयो: "मानिसका पुत्र को हुन् भनेर मानिसहरूलाई कसले भन्छ?" हाम्रो लागि यो आज पनि प्रासंगिक छ: यो मान्छे को हो? ऊसँग कस्तो शक्ति छ? हामीले उसलाई किन विश्वास गर्नुपर्दछ? येशू ख्रीष्ट इसाई आस्थाको केन्द्रविन्दुमा हुनुहुन्छ। हामीले बुझ्नु पर्छ कि ऊ कस्तो खालको मानिस हो।
येशू सामान्य तरीकाले जन्मनुभएको थियो, सामान्यतया हुर्कनुभएको थियो, भोक र तिर्खा लाग्यो र थकित भयो, खायो र पियो र सुत्यो। उनी सामान्य देखिन्थे, बोलचाल भाषा बोल्थे, सामान्य हिँड्थे। उहाँसँग भावनाहरु थिए: करुणा, क्रोध, आश्चर्य, दु: ख, डर (मत्ती:: ३9,36; लूका::;; जोन ११:३;; मत्ती २::३7,9)। उनले भगवानलाई प्रार्थना गरे जस्तै मानिसले गर्नु पर्छ। उसले आफूलाई एक मानिस भन्यो र एक मानिस को रूप मा सम्बोधन गरियो। उहाँ मानव हुनुहुन्थ्यो।
तर उहाँ यस्तो असाधारण व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो कि उहाँको स्वर्गारोहण पछि केहीले इन्कार गरे कि उनी मानव थिए (२ यूहन्ना))। उनीहरुले सोचे कि येशू यति पवित्र हुनुहुन्छ कि उनीहरु मासु, पसिना, पचाउने, पाचन कार्य, मासुको अपूर्णता संग मासु संग कुनै सम्बन्ध छ भन्ने विश्वास गर्न सकेनन्। सायद उहाँ मात्र मानव देखा पर्नुभएको थियो, स्वर्गदूतहरु को रूप मा कहिले काहिँ वास्तव मा मानव बनेको बिना मानव देखा पर्दछ।
यसको विपरीत, नयाँ नियमले यो स्पष्ट पार्दछ: येशू शब्दको पूर्ण अर्थमा मानव हुनुहुन्थ्यो। जोहान्स पुष्टि:
"र वचन मासु बनाइयो ..." (यूहन्ना १:१४)। उहाँ मासुको रूपमा मात्र "प्रकट" हुनुहुन्न र मासुमा मात्र "लुगा लगाउनु" पर्दैन। ऊ मासु भयो। येशू ख्रीष्ट "शरीर मा आउनुभयो" (१ Jn। ४,२)। हामी जान्दछौं, जोन भन्छन्, किनकि हामीले उहाँलाई देख्यौं र किनकि हामीले उसलाई छुयौं (१ यूहन्ना १: १-२)।
पावलका अनुसार, येशू "पुरुषहरु बराबर हुनुभयो" (फिलिप्पी २:)), "कानून अन्तर्गत राखिएको" (गलाती ४: ४), "पापी शरीर को रूप मा" (रोमी:: ३)। हिब्रूहरुलाई पत्र को लेखक तर्क छ कि जो को लागी मानिस लाई छुटकारा पाउन को लागी सार मा मान्छे बन्नु भएको थियो: «किनकि बच्चाहरु अब मासु र रगत को हो, उसले पनि यो समान मापन मा स्वीकार गरीयो ... सबै कुरामा उहाँका भाइहरु (हिब्रू २: १४-१2,7)।
हाम्रो मुक्ति खडा छ वा येशू साँच्चै हुनुहुन्थ्यो कि संग पतन हुन्छ - र छ। हाम्रो अधिवक्ता, हाम्रो प्रधान पुजारी को रूप मा उनको भूमिका खडा छ वा उहाँ साँच्चै मानव चीजहरु लाई अनुभव गरीरहनुभएको छ (हिब्रू ४:१५)। उहाँको पुनरुत्थान पछि पनि, येशू मासु र हड्डीहरु हुनुहुन्थ्यो (यूहन्ना २०:२4,15; लूका २४:३))। स्वर्गीय महिमामा पनि उहाँ मानव बन्नुभयो (१ तिमोथी २,५)।
"उहाँ को हुनुहुन्छ?" फरिसीहरूले सोधे जब उनीहरूले येशूलाई पाप क्षमा गरेको देखे। "भगवान बाहेक पाप कसले क्षमा गर्न सक्छ?" (लूका ५:२१।) पाप परमेश्वरको विरुद्धमा अपराध हो; कसरी एक व्यक्ति भगवान को लागी बोल्न सक्छ र भन्न सक्छ कि तपाइँको पापहरु मेटिएको छ, मेटाइएको छ? यो निन्दा हो, उनीहरुले भने। येशूलाई थाहा थियो कि उनीहरु यसको बारेमा कसरी महसुस गर्छन्, र उहाँले अझै पापहरु क्षमा गर्नुभयो। उसले यो पनि सुझाव दियो कि ऊ आफै पाप बाट मुक्त छ (यूहन्ना 5,21:8,46)। उनले केहि अचम्मको दावी गरे:
येशूले भन्नुभयो कि उहाँ स्वर्गमा भगवानको दाहिने हातमा बस्नुहुनेछ - अर्को दावी कि यहूदी पुजारीहरु ईश्वरनिन्दा जस्तै लाग्यो (मत्ती २:: -26,63३-65५)।
उनले भगवानको पुत्र भएको दाबी गरे - यो पनि एक निन्दा थियो, यो भनिएको थियो, किनकि त्यो संस्कृति मा व्यावहारिक रूप मा भगवान को लागी आफैलाई उठाउनुको अर्थ थियो (जोन ५:१;; १::))।
येशूले ईश्वर संग यस्तो पूर्ण सम्झौता भएको दाबी गर्नुभयो कि उसले मात्र भगवानले चाहेको कुरा गरे (यूहन्ना ५: १))।
उहाँले पिता (जोन १०:३०) सँग एक भएको दाबी गर्नुभयो, जसलाई यहूदी पुजारीहरुले निन्दा पनि मान्थे (यूहन्ना १०:३३)।
उसले यति ईश्वरमय भएको दाबी गर्‍यो कि जो कोहीले उसलाई देखे उसलाई बुबा देख्नेछन् (यूहन्ना १४: 14,9; १:१1,18)।
उनले परमेश्वरको आत्मा पठाउन सक्षम भएको दाबी गरे (यूहन्ना १::))।
उनले दावी गरे कि उनी स्वर्गदूतहरु पठाउन सक्दछन् (मत्ती १३:४१)।
उहाँलाई थाहा थियो कि परमेश्वर संसारका न्यायाधीश हुनुहुन्छ र साथै परमेश्वरले उनलाई न्यायदण्ड दिनु भएको दाबी गर्नुभयो
हस्तान्तरण गरियो (यूहन्ना ५:२२)।
उनले आफु सहित मरेकाहरुलाई ब्युँताउन सक्षम भएको दाबी गरे (यूहन्ना ५:२१; ::४०; १०:१5,21)।
उहाँले भन्नुभयो कि सबैको अनन्त जीवन उहाँ, येशू (मत्ती:: २२-२३) सँगको सम्बन्धमा निर्भर थियो।
उनले भने कि मोशाले भनेका शब्दहरु पर्याप्त थिएनन् (मत्ती ५: २१-४5,21)।
उसले आफैंलाई विश्रामदिनको भगवान भन्यो - एक भगवानले दिएको कानून! (मत्ती १२:))
यदि उहाँ मात्र मानव हुनुहुन्थ्यो, त्यो अभिमानी, पापी शिक्षा हुनेछ। तैपनि येशूले आश्चर्यजनक कामहरु संग आफ्नो शब्दहरु लाई समर्थन गर्नुभयो। Me मलाई विश्वास गर्नुहोस् कि म पिता मा छु र पिता म मा हुनुहुन्छ; यदि होईन भने, मलाई कामको खातिर विश्वास गर्नुहोस् "(यूहन्ना १४:११)। चमत्कारले कसैलाई विश्वास गर्न बाध्य पार्न सक्दैन, तर उनीहरु अझै बलियो "परिस्थितिजन्य प्रमाण" हुन सक्छन्।
उहाँलाई पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भनेर देखाउन, येशूले एक पक्षाघाती मानिसलाई निको पार्नुभयो (लूका ५: १-5-२17)। उहाँको चमत्कारले प्रमाणित गर्दछ कि उसले आफ्नो बारेमा भनेको सत्य हो। उनीसँग मानव शक्ति भन्दा धेरै छ किनकि उनी मानव भन्दा धेरै छन्। आफ्नो बारेमा दाबी - कुनै अन्य ईश्वर निन्दा संग - येशू संग सत्य मा आधारित थियो। ऊ भगवान जस्तै बोल्न सक्छ र भगवान जस्तै व्यवहार गर्न सक्छ किनकि ऊ शरीर मा भगवान थियो।
येशू आफ्नो पहिचान को बारे मा स्पष्ट रूप मा जान्नुभयो। बाह्र मा उहाँ पहिले नै स्वर्गीय बुबा संग एक विशेष सम्बन्ध थियो (लूका २: ४)। आफ्नो बप्तिस्मा मा उहाँले स्वर्ग बाट एक आवाज सुनेको सुने: तिमी मेरो प्यारो छोरा हौ (लूका ३:२२)। उसलाई थाहा थियो कि उसको सेवा गर्ने एउटा मिशन थियो (लूका ४:४३;:: २२; १३:३३; २२:३))।
पत्रुस को शब्दहरु को जवाफ मा, "तपाइँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरको पुत्र!" येशूले जवाफ दिनुभयो: "धन्य हो, सिमोन, योनाका छोरा; किनकि मासु र रगतले तपाइँलाई यो प्रकट गर्दैन, तर मेरो स्वर्गीय बुबा »(मत्ती १:: १-16-१16)। येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ख्रीष्ट, मसीह हुनुहुन्थ्यो - एक विशेष मिशन को लागी भगवान द्वारा अभिषेक गरिएको।
येशू साहसपूर्वक परम्परा, कानूनको बिरूद्ध, मन्दिरको बिरूद्ध, धार्मिक अधिकारीहरुको बिरूद्ध जानुभयो। उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई सबै कुरा छोडेर उहाँको पछि लाग्न, उहाँलाई पहिलो स्थानमा राख्न, उहाँलाई पूर्णतया वफादार रहन आग्रह गर्नुभयो। उनले परमेश्वरको अधिकार संग बोले - र उही समयमा आफ्नै अधिकार संग कुरा गरे।
येशू विश्वास गर्नुहुन्छ कि पुरानो नियमका भविष्यवाणीहरु उहाँमा पूरा भएका छन्। उहाँ पीडित नोकर हुनुहुन्थ्यो जो मानिसहरुलाई तिनीहरुको पाप बाट छुटकारा पाउन मर्नुहुन्थ्यो (यशैया ५३: ४-५ र १२; मत्ती २::२४; मार्क:: १२; लूका २२:३;; २४:४53,4)। उहाँ शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्थ्यो जो गधामा यरूशलेम प्रवेश गर्नुहुन्थ्यो (जकरिया 5: 12-26,24; मत्ती 9,12: 22,37-24)। उहाँ मानिसको पुत्र हुनुहुन्थ्यो जसलाई सबै शक्ति र अधिकार दिइन्छ (दानियल:: १३-१४; मत्ती २::46४)।
उसको अघिल्लो जीवन
येशूले अब्राहामको अगाडि बस्नुभएको दाबी गर्नुभयो र यो "कालातीतता" एक क्लासिक ढाँचामा व्यक्त गर्नुभयो: "साँच्चै, साँच्चै, म तिमीलाई भन्दछु: अब्राहाम हुनु भन्दा पहिले, म हुँ" (यूहन्ना :8,58:५))। फेरी यहूदी पुजारीहरु लाई विश्वास छ कि येशू यहाँ ईश्वरीय चीजहरु लिइरहनुभएको थियो र उहाँलाई ढु्गा हान्न चाहानुहुन्छ (v। ५)। "म हुँ" भन्ने वाक्यांश प्रस्थान ३:१४ प्रतिध्वनित गर्दछ, जहाँ परमेश्वरले मोशालाई आफ्नो नाम बताउनुहुन्छ: "यस प्रकार तपाइँ इजरायलका सन्तानहरुलाई भन्नु पर्छ: [उहाँ] 'म हुँ' मलाई तिमीलाई पठाएको छ" (एल्बेरफेल्ड अनुवाद) । येशूले यो नाम आफ्नो लागी यहाँ लिनुहुन्छ।
येशू पुष्टि गर्नुहुन्छ कि "संसार हुनु भन्दा पहिले" उहाँले पिता संग महिमा साझा गर्नुभयो (यूहन्ना १:: ५)। जोन हामीलाई बताउनुहुन्छ कि उहाँ पहिले नै समय को शुरु मा अस्तित्व मा हुनुहुन्छ: वचन को रूप मा (जॉन १: १)। र यूहन्ना मा हामी पढ्न सक्छौं कि "सबै चीजहरु" शब्द द्वारा बनाईएको थियो (यूहन्ना १: ३)। बुबा योजनाकार हुनुहुन्थ्यो, शब्द रचनाकार, जसले योजना बनाईएको थियो। सबै थोक उहाँ द्वारा र को लागी बनाईएको थियो (कलस्सी १:१17,5; १ कोरिन्थी::))। हिब्रू १: २ ले भन्छ कि भगवानले पुत्रको माध्यम बाट "संसार बनाउनुभयो"।
हिब्रूहरुमा, कलस्सीहरुलाई पत्र मा जस्तै, यो भनिएको छ कि पुत्र ब्रह्माण्ड "बोक्छ", कि यो उहाँमा "अवस्थित" छ (हिब्रू १: ३; कलस्सी १:१ 1,3)। दुबैले हामीलाई बताउँछन् कि उहाँ "अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप" (कलस्सी १:१५), "उहाँको अस्तित्वको छवि" (हिब्रू १: ३) हुनुहुन्छ।
येशू को हुनुहुन्छ उहाँ एक भगवान हुनुहुन्छ जो मासु बन्नुभयो। उहाँ सबै थोक को निर्माता हुनुहुन्छ, जीवन को राजकुमार (प्रेरित ३:१५)। उहाँ भगवान जस्तै हुनुहुन्छ, भगवान जस्तै महिमा छ, शक्ति को एक बहुतायत छ कि मात्र भगवान छ। कुनै आश्चर्य छैन कि चेलाहरूले निष्कर्ष निकाले कि उहाँ ईश्वरीय हुनुहुन्थ्यो, शरीरमा भगवान हुनुहुन्थ्यो।
येशू एक अलौकिक तरीका मा गर्भ धारण गरिएको थियो (मत्ती १:२०; लूका १:३५)। ऊ कहिल्यै पाप नगरी बाँच्यो (हिब्रू ४:१५)। उहाँ निर्दोष हुनुहुन्थ्यो, कुनै दोष बिना (हिब्रू ::२1,20;:: १४)। उसले पाप गरेन (१ Pt २.२२); उहाँमा कुनै पाप थिएन (१ यूहन्ना ३: ५); उहाँलाई कुनै पापको बारेमा थाहा थिएन (२ कोरिन्थी ५:२१)। प्रलोभन जतिसुकै बलियो होस्, येशूको सधैं ईश्वरको आज्ञा पालन गर्ने बलियो इच्छा थियो। उहाँको मिशन परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु थियो (हिब्रू १०:))।
मानिसहरु धेरै अवसरहरु मा येशू को पूजा (मत्ती 14,33; 28,9 र 17; जॉन 9,38)। स्वर्गदूतहरुको पूजा गर्न सकिदैन (प्रकाश १:: १०), तर येशूले उनीहरुलाई अनुमति दिनुभयो। हो, स्वर्गदूतहरु पनि भगवान को पुत्र को पूजा (हिब्रू १:))। केहि प्रार्थना येशू लाई निर्देशित गरियो (प्रेरित:: ५ --19,10०; २ कोरिन्थी १२:;; प्रकाश २२:२०)।
नयाँ नियम येशू ख्रीष्ट असाधारण उच्च प्रशंसा, सूत्रहरु संग सामान्यतया भगवान को लागी आरक्षित गरीएको छ: him उहाँको सदासर्वदा महिमा होस्! आमेन »(२ तिमोथी ४:१;;
२ पत्रुस ३:१; प्रकाश १,2)। उहाँसँग शासकको उच्चतम उपाधि छ (एफेसी १: २०-२१)। यदि हामी उहाँलाई भगवान भन्छौं, त्यो धेरै अतिरंजित छैन।
प्रकाश मा भगवान र थुमा समान रूप मा प्रशंसा गरिन्छ, जो समानता को संकेत गर्दछ: "जो सिंहासन मा बस्छ र थुमा को लागी प्रशंसा र सम्मान र प्रशंसा र शक्ति सदा र सदाको लागी हो!" (प्रकाश ५:१३)। पुत्रलाई पनि पिता जस्तै सम्मानित हुनु पर्छ (यूहन्ना ५:२३)। भगवान र येशु लाई समान रुपमा अल्फा र ओमेगा भनिन्छ, सबै कुराको आरम्भ र अन्त्य (प्रकाश १: and र १;; २१:;; २२:१३)।
परमेश्वरबारे पुरानो नियमका अंशहरू प्रायः नयाँ नियममा लिइन्छन् र येशू ख्रीष्टलाई प्रयोग गरिन्छ। एउटा उल्लेखनीय कुरा यो हो: पूजाको बारेमा यस खण्ड: «यसैले परमेश्वरले उनलाई उच्च पार्नुभयो र उनको नाम दिनुभयो जुन येशूको नाममा सबै नामहरूमा उच्च छ।
स्वर्गमा र पृथ्वीमा र पृथ्वी मुनि रहेका सबैले झुक्नु पर्छ र हरेक जिब्रोले येशू ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गर्नु पर्छ, भगवान पिता को महिमा को लागी "(फिलिप्पी २: -2,9 -११, यशैया ४५.२३ बाट एक उद्धरण)। येशूलाई सम्मान र सम्मान दिइएको छ कि यशैया भन्छन् भगवान लाई दिनु पर्छ।
यशैया भन्छन् कि एक मात्र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ - भगवान (यशैया ४३:११; ४५:२१)। पावल स्पष्ट रूप मा भन्छन् कि भगवान मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, तर यो पनि कि येशू मुक्तिदाता हुनुहुन्छ (Tit43; 11 र 45,21)। त्यहाँ एक मुक्तिदाता वा दुई छ? प्रारम्भिक ईसाईहरूले यो निष्कर्ष निकाले कि बुबा भगवान हुनुहुन्छ र येशू भगवान हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ मात्र एक भगवान हुनुहुन्छ र यसैले मात्र एक मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। पिता र पुत्र अनिवार्य रूप बाट एक (भगवान) हो, तर फरक व्यक्तिहरु हुन्।
धेरै अन्य नयाँ नियम को खण्डहरु पनि येशू भगवान लाई कल गर्नुहोस्। जोन १,१: "परमेश्वर वचन हुनुहुन्थ्यो।" श्लोक १:: «कसैले पनि भगवानलाई देखेको छैन; एक मात्र जो भगवान हुनुहुन्छ र बुबाको गर्भमा हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई उहाँलाई घोषणा गर्नुभयो। " येशू भगवान हुनुहुन्छ जसले हामीलाई बुबा जान्न दिनुहुन्छ। पुनरुत्थान पछि, थोमाले येशूलाई भगवानको रूपमा चिने: "थोमाले जवाफ दिए र उसलाई भने: मेरो प्रभु र मेरो भगवान!" (यूहन्ना 1,1:18)।
पावल भन्छन् कि पुर्खाहरु महान थिए किनभने उनीहरु बाट "ख्रीष्ट शरीर अनुसार आउनुहुन्छ, जो सबै भन्दा माथि भगवान हुनुहुन्छ, सदाको लागी धन्य हुनुहुन्छ। आमेन »(रोमी 9,5)। हिब्रूहरुलाई लेखेको पत्रमा, भगवान आफैले पुत्रलाई "भगवान" भन्नुभएको छ: "भगवान, तपाइँको सिंहासन सदासर्वदा रहिरहन्छ ..." (हिब्रू १:))।
"किनकि उहाँमा [ख्रीष्ट]," पावलले भने, "ईश्वरको सम्पूर्णता शरीरमा बास गर्दछ" (कलस्सी २:))। येशू ख्रीष्ट पूर्णतया भगवान हुनुहुन्छ र आज पनि "शारीरिक रूप" छ। उहाँ परमेश्वरको सटीक छवि हुनुहुन्छ - भगवानले मासु बनाउनुभयो। यदि येशू मात्र मानव हुनुहुन्थ्यो, उहाँमाथि हाम्रो भरोसा राख्नु गलत हुनेछ। तर किनकि उहाँ ईश्वरीय हुनुहुन्छ, हामीलाई उहाँमाथि भरोसा गर्ने आज्ञा दिइएको छ। उहाँ बिना शर्त विश्वसनीय हुनुहुन्छ किनकि उहाँ ईश्वर हुनुहुन्छ।
हाम्रो लागी, येशू को ईश्वरत्व महत्वपूर्ण महत्व को हो, किनकि जब उहाँ ईश्वरीय हुनुहुन्थ्यो तब उसले हामीलाई परमेश्वर लाई सही रुपमा प्रकट गर्न सकीन्छ (यूहन्ना १:१;; १४..1,18)। केवल एक भगवान व्यक्तिले हामीलाई माफ गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ, हामीलाई भगवान संग मिलाउन सक्नुहुन्छ। केवल एक भगवान व्यक्ति हाम्रो विश्वास को वस्तु बन्न सक्नुहुन्छ, प्रभु जसलाई हामी बिल्कुल वफादार छौं, मुक्तिदाता जसलाई हामी गीत र प्रार्थना मा आदर गर्दछौं।
साँच्चिकै मानव, साँचो परमेश्वर
येशू, परमेश्वरका पुत्र, ईश्वरीय हुनुहुन्छ।
परमेश्वरको पुत्र वास्तवमा मानव बन्नुभयो, तर पिताले त्यसो गर्नुभएन।
परमेश्वरको पुत्र र पिता फरक हुनुहुन्छ, भिन्न छैन
त्यहाँ एक मात्र ईश्वर छ।
छोरा र बुबा एकै ईश्वरमा दुई व्यक्तित्व हुन्।
Nicaea को परिषद (३२५ ईस्वी) येशूको ईश्वरत्व, परमेश्वरको पुत्र, र बुबा (Nicene पंथ) संग उनको आवश्यक पहिचान स्थापित। काउन्सिल अफ चाल्सेडन (४५१ ईस्वी) ले थपे कि उनी पनि एक मानिस थिए:
So [तेसैले, पवित्र बुबाहरुलाई पछ्याउँदै, हामी सबै एकजुट भएर सिकाउँछौं कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट एक र एउटै पुत्र हुनुहुन्छ भनी दाबी गर्न को लागी; एउटै Godhead मा सिद्ध छ र मानवता मा उस्तै सिद्ध, उही साँच्चै भगवान र साँच्चै मान्छे ... ईश्वर को पछि पिता बाट जन्मेको समय भन्दा पहिले ... मेरी, भर्जिन र भगवान को आमा (theotokos) बाट बाहिर , उहाँ [जन्म] एक र एउटै, ख्रीष्ट, छोरा, मूल, दुई प्रकृति मा unmixed को रूप मा जन्मिएको छ ... प्रकृतिहरु बीचको फरक कुनै एकता को खातिर समाप्त गरीएको छैन; बरु, दुई प्रकृति को प्रत्येक को विशिष्टता संरक्षित छ र एक व्यक्ति को रूप मा गठबन्धन ...
उहाँले हामीलाई परमेश्वर के गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भनेर देखाउनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो सृष्टिको हिस्सा बन्न सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँले पवित्र र पापी को बिचमा, रहित र सृष्टिको बीचको खाडल भर्न सक्नुहुन्छ। हामी सोच्न सक्छौं कि यो असम्भव छ; भगवान को लागी यो सम्भव छ। येशूले हामीलाई यो पनि देखाउनुहुन्छ कि नयाँ सृष्टिमा मानवता के हुनेछ। जब उहाँ फिर्ता आउनुहुन्छ र हामी हुर्केका छौं, हामी उहाँ जस्तै देखिनेछौं (१ यूहन्ना ३: २)। हामी उहाँको रूपान्तरित शरीर जस्तै एक शरीर हुनेछ (१ कोरिन्थी १५: ४२-४))।
येशू हाम्रो ट्रेल ब्लेजर हुनुहुन्छ, उहाँ हामीलाई परमेश्वरकहाँ जाने बाटो येशूमार्फत देखाउनुहुन्छ। किनभने उहाँ मानव हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो कमजोरीहरूको साथ महसुस गर्नुहुन्छ; किनभने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ प्रभावकारी ढ God's्गमा हाम्रो लागि परमेश्वरको दाहिने पक्षमा खडा हुन सक्नुहुन्छ। येशू हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन सक्छौं हाम्रो उद्धार सुरक्षित छ।